ထိုင်း Lady boy ၊ မြန်မာ မိုးကြိုး ငှက်ငယ်ကလေးများနဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကို စိုးရိမ်တယ် | ဧရာဝတီ
ထိုင်း Lady boy ၊ မြန်မာ မိုးကြိုး ငှက်ငယ်ကလေးများနဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကို စိုးရိမ်တယ်
မစပ်စု| November 6, 2012 | Hits:57,147
36 | | ထိုင်း Lady boy ၊ မြန်မာ မိုးကြိုး ငှက်ငယ်ကလေးများ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသည့် ထိုင်း Lady boy Tiffany ၏ ဂီတပွဲ (ဓာတ်ပုံ – myanmarcelebrity.com)
ရန်ကုန်မြို့ MCC ခန်းမမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ နဲ့ ၂၆ ရက် တွေက “ထိုင်းလုလင်ပျိုတို့ရဲ့ ဣတ္ထိယအသွင် ကကြိုး သဘင်” ဆိုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက Lady boy အလှပဂေးတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာ အားလုံးလည်း အသိပါ။
အဲဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင် တင်ဆက်မှုတွေကို မြန်မာ ပွဲကြည့် ပရိသတ်တွေကလည်း တအံ့တသြ ကြည့်ရှုခဲ့ကြ တာပါ။
Lady boy တွေရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး မက်မက် စက်စက် လာရောက်ကြည့်ရှု ကြရတယ်။
အဲ့ဒီ ဖျော်ဖြေပွဲကို တွေ့တော့ မစပ်စု သတိရမိသွားတာလေး တခုကို ရေးချင်မိပါတယ်။
အခုလိုပဲ မစပ်စုတို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်း ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်လောက် ကတည်းက လိင်တူချစ်သူ (မိန်းမလျာ) တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့ ရာသီအလိုက် ဘုရားပွဲတွေမှာ ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင် အောင်မြင်ခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။
“မိုးကြိုး ငှက်ငယ်ကလေးများ”ဆိုတဲ့ အလွန်နာမည်ကြီး ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ လိင်တူချစ်သူများ အဖွဲ့ပါ။
မစပ်စု သိသလောက်တော့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် တနည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ပါ။ အဲဒီခေတ်အခါက နာမည်ကြီး မင်းသား မင်းသမီးတွေနဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ စတိုင် တွေ၊ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ၊ တေးသီချင်းတွေ၊ တေးသရုပ်ဖော်၊ စတိတ်ရှိုး စတာတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်း Lady boy တွေက ကြေးကြီးကြီးနဲ့ တင့်တောင့်တင့်တယ် ဖျော်ဖြေလာနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မစပ်စုတို့ မြန်မာပြည်က“မိုးကြိုး ငှက် ငယ်ကလေးများ” အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှု ကဏ္ဍကတော့ ပါမစ် အခက်အခဲတွေ၊ နေရာ အခက် အခဲတွေနဲ့ အများကြီး ရင်ဆိုင် ခဲ့ရလို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘုရားပွဲတိုင်းကို လိုက် မကနိုင်တော့ဘဲ အဖွဲ့တွင်း စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲနဲ့ ကြုံတွေ့နေရ တယ်လို့ “မိုးကြိုး ငှက်ငယ်ကလေးများ” အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် စောနန္ဒာ က ပြောပြပါတယ်။
“အခုဆို ပွဲတိုင်း လိုက်မကနိုင်တော့ဘူး။ ရုံကြီးသွင်းဖို့ အရမ်းခက်ခဲလာပါတယ်။ ရုံခတွေ မြေခတွေ၊ သစ်၊ ၀ါး၊ ဓနိ တွေ အရမ်း ဈေးကြီး တာပဲ။ အရမ်း ခက်ခဲတာပဲ။ ဂေါပကတွေ မဟုတ်ဘူး၊ လောပကတွေ၊ လောဘ ကြီးတာတွေများတော့ မနိုင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒီမှာတင် အနုပညာကြေးက ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ တချို့ ဘုရားပွဲတွေကျတော့ ဟိုတုန်းကဆို ဇာတ်ရုံသုံးနေရာ၊ လေးနေရာလေ။ အခု ဆိုရင် တရုံပဲ ပေးတော့တယ်။ အဲ့ဒီ တရုံတောင် နာမည်ကြီးဇာတ်ကြီးတွေ ၀င်လာရင် ကိုယ်က လုံးဝ နေရာမရတော့ဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရုံဆောက်ပြီဆိုရင် ရုံခ၊ မြေခတွေက ဈေးတွေကြီးတော့ မ၀ယ်နိုင်၊ မ၀ယ်နိုင်တော့ နားရတာ များလာတယ်။ ပွဲကြီး တွေ ပဲ ဦးစားပေးပြီး နှိမ်တဲ့ သဘောပေ့ါ”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အဲဒါတွေထက် ဇာတ်ရုံကြီးတွေမှာ လိင်တူချစ်သူတွေ ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကို လက်မခံနိုင်တဲ့ အနေအထားလည်း ရှိပါသေး တယ်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့က ဖိလည်း မဖိနှိပ်ဘူး။ အားလည်း မပေးဘူး။ ပုံမှန်ပဲ ထားထားတာ။ ဒီတော့ လုပ်ရတာလည်း သိပ် အဆင် မပြေဘူး။ ကျနော်တို့မှာ အနုပညာအားရှိတယ်။ ပံ့ပိုးမှုအား လုံးဝ မရှိဘူး။ ပံ့ပိုးဖို့နေနေသာသာ အမျိုးသား ဇာတ်ရုံကြီး ကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ငှား ကမယ်ဆိုတောင် အခြောက်မ တွေကို ပေး မကဘူး။ အဲ့တော့ ဇာတ်ရုံကြီးတွေမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ မပြောနဲ့ တန်ဆောင်တိုင် သီတင်းကျွတ် ဘုရားပွဲတွေမှာတောင် ဒီအတိုင်းဆို ပါမစ် မပေးချင်ဘူး။
ကာရာအိုကေ လိုမျိုး ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုတဲ့သူလေးတွေ ထည့်ရတယ်။ ကိုယ်က ပစ္စည်းတွေ ယူပြီးသွား ဟိုကျတော့မှ ပါမစ် မရလို့ဆိုတော့ စားဝတ်နေရေးတွေခက် ဒုက္ခတွေရောက်လို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကလည်း ခိုင်လုံအောင် မရှိဘူး”လို့ စောနန္ဒာ က ပြောပါတယ်။
ဆိုတော့ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဟာ ကျေးလက် တောရွာ ဘုရားပွဲဈေးတွေမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ရတဲ့ အနေ အထားကနေ ထပ်ပြီး တဆင့်တက် မလာနိုင်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။
ဘာကြောင့် အခုလိုခွင့်မပြုရတာလဲလို့ စောနန္ဒာကို မေးကြည့်တော့“သိပါဘူး။ တတိုင်းပြည်လုံး မိန်းမလျာဖြစ်မှာ စိုးလို့ နေမှာပေ့ါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က Miss Red Ribbonဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ အလှမယ်ရွေးပွဲကို စည်းစည်းကားကား ကျင်းပ လာလေတော့ အားလုံးပဲ တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးကြီးက လူတဦးရဲ့ အားပေး ကူညီမှုကြောင့် ကျင်းပခွင့် ပါမစ်ရခဲ့တာ လို့လည်း အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အသံသိုးသိုးသန့်သန့် ထွက်လာပါသေး တယ်။ နောက်နှစ် ၂၀၁၀ မှာလည်း ဒီပွဲမျိုး ထပ်ကျင်းပဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ပါမစ်မရလို့ မကျင်းပနိုင်တော့ပါဘူး။
လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေး တရပ်လို့ဆိုသမို့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ဆိုတဲ့ မစပ်စုတို့ မြန်မာပြည်ကြီးလည်း ဒီအခွင့်အရေးများ ထွန်းကား လာပေလိမ့်ဦးမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရ မလို ဖြစ်နေပါပြီ။
မယ်အင်တာနက်ဆုကို ရရှိပြီးနောက် နန်းခင်ဇေယျာဟာ မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေး ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Blue Mountain အချိုရည်ရဲ့တနှစ်တာ Brand Ambassador နဲ့ Daw Win Garment Center i-MAX, Giorenzo & U’JASS အ၀တ်အထည်များ အတွက် ၁၄ လတာ Brand Ambassador တယောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်တော့မှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ Blue Mountain အချိုရည် ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးမှု အခြေအနေ ကို တွေ့မြင်ကြရတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က ပရိသတ်တွေက သူ လုပ်ကိုင်လာတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းအပေါ် စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ သတိပေး ပြောဆိုတာတွေ ရှိလာပါတော့တယ်။
နန်းခင်ဇေယျာကတော့ သူအနုပညာ အလုပ် လုပ်ကိုင်လာတဲ့အပေါ် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မစိုးရိမ်ဖို့ကို သူ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပြန် ပြီး ရှင်းပြ ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“ညီမရဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုအပေါ်မှာ ညီမကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ညီမအနေနဲ့ ရှင်းပြချင် ပါတယ်။ ညီမက Miss Myanmar, (Miss Internet, Miss People’s Choice) တယောက်အနေနဲ့သာ စီးပွားရေး ကြော်ငြာ၊ စာစောင် မျက်နှာဖုံးများ၊ ပြက္ခဒိန်များကို ရိုက်ကူးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်ကလည်း ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို ပရိသတ်များနဲ့ အတူ လုပ် ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်သလို၊ ညီမအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် လုပ်ဖို့ကို အခုအချိန်မှာ လုံးဝ မစဉ်းစား သေးပါဘူးရှင့်။ Tourist Guide အနေ နဲ့လည်း ညီမ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ”လို့ ရေးထားတာပါ။
Miss Myanmar နန်းခင်ဇေယျာဟာ လတ်တလောမှာ အနုပညာအလုပ်အပြင် ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ ရှေ့လျှောက်လည်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ဆက် လုပ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောဆိုထားပါသေးတယ်။
သူ့ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ် အများအပြား ပိုင်ဆိုင်ထားသူ Miss Internet, People Choice Award ဆုရှင် နန်းခင်ဇေယျာ တယောက် ဘယ်လို ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ၊ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်သွားဦးမလဲ ဆိုတာလည်း စောင့်မျှော် ကြည့်ကြပါဦး …။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ပုတက် November 6, 2012 - 11:06 am	မစပ်စုဆောင်းပါးက လူအခွင့်အရေးဆိုပြီး အခြောက်တွေကို အားပေးအားမြောက် လုပ်ပေးရမလို။ ဒါမှမြန်မာပြည်က လူအခွင့်အရေးလေးစားတဲ့နုိူင်ငံဖြစ်လာတော့မလို။ ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ်ဆွေးနွးပရစေ လူအခွင့်အရေးအကြောင်း၊ အမှားပါရင်၊ ထိခိုက်မိရင် ခွင့်လွတ်ပါ။
အတိုပြောရင် လူဖြစ်မှ လူအခွင့်အရေး ကိုခံစားရမယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လူဖြစ်ရုံနဲ့တော့ လူလို့ ပြောမရဘူး။ စိတ်ပိုင်းမှာပါ လူစိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ယောက်ကျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တာဝန်ယူရမယ်။ သမတဖြစ်ရင် သမတတာဝန်၊ တရားသူကြီဖြစ်ရင် တရာသူကြီးတာဝန်၊ ယူနိူင်မှ။ ယောကျားဖြစ်ပြီး ယောကျားတာဝန်မယူနိူင်တဲ့ အခြောက်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ အခွင့်အရေးပေးရလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။
Reply	Doe November 6, 2012 - 5:50 pm	What an ignorant comment from seemingly uneducated person. According to researchers’ theories, these people’s brain kind of lack of influence by testosterone during gestation. So no matter how they try, they will only have female minds, thoughts and habits at least psychologically and will always be. They are born with this. It is nothing wrong with that. It is their choice and doesn’t hurt us.
And one normal guy can’t just change to gay by watching them or their shows. It is funny some people think like that. Moreover, unlike in Myanmar movies, they can’t just change back to normal.
Last, The responsibilities of the men is not just beingaman. There are many men who are worse than female or gay. Just look at ur retarded myanmar high army official. Bully people with firearms. U think they are responsible as MEN? Shame on you! u mean gay and lesbians don’t have human mind. what are they then? btw, i amaman. sex differentiation is already outdated.
Reply	ZTrules November 10, 2012 - 12:46 am	Your comment will be flawless if you haven’t criticized or attack someone whom you don’t know. He just simply wrote what he believed, like you did. Shouldn’t we respect each other even on this internet?
Other than that, I agreed with the rest of your comment.
Please be remember our religious belief playsabigger role in the gay issue. Even in North America, not everyone can accept that gay issue. So, how can we expectaclear view fromaBurmese person, who was born and raised in Burma asaBuddhist??
I understand why gays are gays and accept the fact but I want my sons to be straight.
I am Burmese from North America.
Reply	michael November 9, 2012 - 2:18 am	right…pu tet.,
Reply	zawlinn November 7, 2012 - 12:20 pm	ကိုပုတက်ရဲ့ တင်ပြပုံလေးကောင်းပါတယ်…တာဝန်ယူတတ်မှဆိုတာမှန်ပါတယ်..အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ရင် စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှုာလေ..ယောင်္ကျားက မိန်းမလိုဆို..ဘာအသုံးကျမှာတုန်း..ကျားဆိုကျား..မဆိုမပေါ့….
Reply	The November 11, 2012 - 10:26 am	ဒိလိုlady boy တွေကိုအားမပေးသင့်ဘူး